Indlela Yokuhlanza Nokukhwabanisa-Ubufakazi Bokungezona Okujwayelekile - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Indlela Yokuhlanza Nokuqothula-Ubufakazi Bokungavamile
Indlela yokuhlanza indawo:
Ukuhlanzwa kwendawo: Ukuhlanzwa kufanele kususelwe esimweni sombuso wokukhwabanisa kanye nemibandela ngaleso sikhathi, futhi izindlela ezifanele zisetshenziselwa ukuhlanzwa kwe-solvent, ukuhlanzwa kwamakhemikhali nokuhlanzwa kwemishini.
2, Ngemuva kokumiswa komhlabathi, ingahlanzwa futhi yomiswe ngomoya omile ophethwe omile, noma ungomiswa ngomswakama we-120-170 ° C, noma ungasuswa nge-gauze ehlanzekile.
Indlela yokusebenzisa i-anti-rust oil:
1, ukuhamba ngendlela: Ezinye izinto ezincane zigcwele amagesi okugqwala, ukuze ubuso obuningi bokugcoba amafutha, i-oil film thickness ingafinyelelwa ngokulawula izinga lokushisa noma i-viscosity ye-rust-proof grease.
Indlela yokugubha isetshenziselwa imishini yokwakha yangaphandle noma imikhiqizo ekhethekile yokwakheka engafanelekile ukugaya noma ukuphalaza. Uma uxubha, kubalulekile ukuba unakekele ukukhiqiza ukuqongelela, futhi kuyadingeka ukuvimbela upende ukuba uphume.
I-3, indlela yefrafu Enye into enkulu yokukhwabanisa ayikwazi ukusetshenziselwa amafutha okucwiliswa, ngokuvamile ane-0.7Mpa ingcindezi yesikhwama somoya ocindezelweyo osebenza endaweni yokuhlanza umoya. Indlela yokufiphala isetshenziswa ekwenzeni i-soluted i-rust anti-oven noma i-thin layer yokugaya amafutha okuvimbela, kepha ukuvikelwa komlilo okuphelele kanye nokuvikelwa komsebenzi kufanele kwamukelwe.